Ny tombotsoan’ny delf - DELF DALF MADAGASCAR
Inona no ilaina ny DELF DALF ?
Ireo diplaoma ireo dia ekena manerana an’izao tontolo izao ary manankery mandritra ny fotoana tsy voafetra.
Ahafahana manome lanja ny fahaizanao ny teny frantsay, na eo amin’ny lafin’ny fianarana na arak’asa. Ny marim-pahaizana DELF DALF dia azo atao any amin’ireo toeram-panadinana nahazo alalana mahery ny 1000 miparitaka amin’ny firenena 173.
Ahafahana manome lanja ny CV anao. Eto Madagasikara, efa maherin’ny 43 000 ireo mpiadina efa nampiasa ny diplaoma DELF DALF satria ity farany dia fantatra ary eken’ireo fitatanan-draharaha maro, ireo mpampiasa ary ireo toeram-pampianarana.
Ny DELF B2 na ny DALF dia ahafahana miditra amin’ireo oniversite frantsay, eropeanina na mampiasa ny teny frantsay. Ny fahazahoana ny,DELF B2 dia manafoana ny fanaovanao fanadinana momba ny fahaizana frantsay izay idirana any amin’ireo oniverste frantsay rehetra.
Ny tombotsoan’ny DELF DALF
Izy ireo dia diplaoma tsy mifampiakina : ny mpiadina iray dia afaka manao avy hatrany ny diplaoma izay mifanaraka amin’ny fahaizany frantsay.
Ireo karazana DELF rehetra (ho an’ny rehetra, Zatovo, ankizy ary arak’asa) dia mitovy daholo ny lanjany sy ny tombotsoany.
Mba ahazahoana azy, mila mahazo ny 50% ny isa fotsiny, amin’ireo sokaji-pahaizana 4. Ny naoty azo ambony indrindra dia afaka mameno ny naoty somary latsaka amin’ireo sokaji-pahaizana hafa.